A ga-akpọpụ onye na-adịghị ọcha iche (1-4)
Mmadụ ikwupụta mmehie na ịkwụ ụgwọ ma ikpe ma ya (5-10)
Mmiri e ji achọpụta ma nwaanyị ọ̀ gbaala n’èzí (11-31)
5 Jehova gwakwara Mosis, sị: 2 “Nye ndị Izrel iwu ka ha si n’ebe unu mara ụlọikwuu kpọpụ ndị niile na-arịa ekpenta+ na ndị niile ihe na-agbapụta n’ahụ́+ nakwa ndị niile na-adịghị ọcha maka na ha metụrụ onye nwụrụ anwụ* aka.+ 3 Ma hà bụ ụmụ nwoke ma hà bụ ụmụ nwaanyị, unu ga-akpọpụ ha. Unu ga-esi n’ebe unu mara ụlọikwuu kpọpụ ha ka ha ghara imerụ+ ụlọikwuu nke ndị m binyeere.”+ 4 N’ihi ya, ndị Izrel mere otú ahụ wee si n’ebe ha mara ụlọikwuu kpọpụ ha. Ndị Izrel mere nnọọ otú Jehova gwara Mosis. 5 Jehova wee gwa Mosis, sị: 6 “Gwa ndị Izrel, sị, ‘Ọ bụrụ na nwoke ma ọ bụ nwaanyị emee mmehie ọ bụla ndị mmadụ na-eme ma mehie Jehova, ikpe amala onye* ahụ.+ 7 Ọ* ga-ekwupụta+ mmehie o* mere ma kwụchaa ụgwọ o kwesịrị ịkwụ maka ikpe mara ya, kwụọkwa otu ụzọ n’ụzọ ise nke ụgwọ ahụ.+ Ọ ga-enye ya onye o mejọrọ. 8 Ma ọ bụrụ na onye o mejọrọ enweghị onye ikwu ọ ga-akwụ ụgwọ ahụ,* a ga-ewegara ya Jehova. Ọ ga-abụzi nke onye nchụàjà, ya na ebule a ga-eji chụọ àjà ikpuchiri ya mmehie.+ 9 “‘Onyinye ọ bụla dị nsọ+ ndị Izrel wetaara onye nchụàjà ga-abụ nke onye nchụàjà.+ 10 Ihe ndị dị nsọ onye nchụàjà natara onye ọ bụla ga-abụ nke ya.* Ihe ọ bụla onye ọ bụla nyere onye nchụàjà, ihe ahụ ga-abụ nke onye nchụàjà ahụ.’” 11 Jehova gwakwara Mosis, sị: 12 “Gwa ndị Izrel okwu, sị ha, ‘Ihe a ka a ga-eme ma ọ bụrụ na nwunye mmadụ emehie wee gbaa n’èzí, 13 ya na nwoke ọzọ enwee mmekọahụ,+ ma di ya amaghị, a chọpụtaghịkwa ihe o mere, o wee merụọ onwe ya, ma e nweghị onye gbara akaebe ihe o mere, e jideghịkwa ya: 14 Ma di ya ọ̀ na-ekwosa ya ekworo, na-enyokwa ya enyo na ọ gbaala n’èzí mgbe nwaanyị ahụ merụrụla onwe ya, ma di ya ọ̀ na-ekwosa ya ekworo, na-enyokwa ya enyo na ọ gbaala n’èzí mgbe nwaanyị ahụ na-emerụbeghị onwe ya, 15 nwoke ahụ ga-akpọrọ nwunye ya kpọtara onye nchụàjà, wetakwa otu ụzọ n’ụzọ iri nke otu efa* ntụ ọka bali ọ ga-enye maka nwunye ya. Ọ gaghị awụsa ya mmanụ ma ọ bụ tụkwasị ya frankinsens n’ihi na ọ bụ àjà ọka ekworo, àjà ọka nke na-eme ka e cheta onye ikpe mara. 16 “‘Onye nchụàjà ga-akpọta nwaanyị ahụ ma mee ka o guzo n’ihu Jehova.+ 17 Onye nchụàjà ga-eji ite ụrọ kuru mmiri nsọ. Onye nchụàjà ga-ekporo ájá n’ala ụlọikwuu ahụ kponye n’ime mmiri ahụ. 18 Onye nchụàjà ga-eme ka nwaanyị ahụ guzo n’ihu Jehova. Ọ ga-atọsa ntutu isi nwaanyị ahụ ma dọkwasị àjà ọka ahụ e ji echeta onye ikpe mara, ya bụ, àjà ọka ekworo,+ n’ọbụ aka abụọ nwaanyị ahụ. Onye nchụàjà ga-ebu mmiri ahụ na-elu ilu e ji abụ mmadụ ọnụ n’aka nke ya.+ 19 “‘Onye nchụàjà ga-eme ka nwaanyị ahụ ṅụọ iyi. Ọ ga-asị nwaanyị ahụ: “Ọ bụrụ na e nweghị nwoke ọzọ gị na ya nwere mmekọahụ kemgbe ị lụrụ di,*+ ọ bụrụkwa na i mehiebeghị wee merụọ onwe gị, ka mmiri a na-elu ilu e ji abụ mmadụ ọnụ ghara ime gị ihe ọ bụla. 20 Ma ọ bụrụ na i mehiela kemgbe ị lụrụ di wee merụọ onwe gị, gị na nwoke ọzọ enwee mmekọahụ,—”+ 21 Onye nchụàjà ga-eme ka nwaanyị ahụ ṅụọ iyi.* Onye nchụàjà ga-asịkwa nwaanyị ahụ: “Ka Jehova mee ka ị bụrụ onye ndị obodo ha na-abụ ọnụ na onye ha ga-eji na-aṅụ iyi ma Jehova mee ka apata ụkwụ* gị dapụ,* meekwa ka afọ gị zaa. 22 Mmiri a e ji abụ mmadụ ọnụ ga-abanye n’eriri afọ gị ka o mee ka afọ gị zaa, meekwa ka apata ụkwụ* gị dapụ.”* Nwaanyị ahụ ga-asị: “Amen! Amen!”* 23 “‘Onye nchụàjà ga-ede ihe ndị a nwaanyị ahụ ṅụrụ n’iyi n’akwụkwọ ma sabanye ha n’ime mmiri ahụ na-elu ilu. 24 Ọ ga-emezi ka nwaanyị ahụ ṅụọ mmiri ahụ na-elu ilu nke e ji abụ mmadụ ọnụ. Mmiri ahụ e ji abụ mmadụ ọnụ ga-abanye n’afọ ya ma gbuo ya mgbu. 25 Onye nchụàjà ga-eburu àjà ọka ekworo+ ahụ n’aka nwaanyị ahụ ma fegharịa ya n’ihu Jehova. Ọ ga-ewetakwa ya nso n’ebe ịchụàjà. 26 Onye nchụàjà ga-ekporo àjà ọka ga-eju ọbụ aka ya ka ọ bụrụ ihe nọchiri anya àjà e wetara. Ọ ga-esu ya ọkụ ka ọ kwụọ anwụrụ ọkụ n’ebe ịchụàjà.+ Ọ ga-emezi ka nwaanyị ahụ ṅụọ mmiri ahụ. 27 Mgbe o mere ka nwaanyị ahụ ṅụọ mmiri ahụ, ọ bụrụ na nwaanyị ahụ merụrụ onwe ya ma gbaa n’èzí, mmiri ahụ e ji abụ mmadụ ọnụ ga-abanye n’afọ ya ma gbuo ya mgbu. Afọ ya ga-aza, apata ụkwụ* ya ga-adapụkwa.* Nwaanyị ahụ ga-abụzi onye ndị obodo ha ji abụ mmadụ ọnụ. 28 Ma, ọ bụrụ na nwaanyị ahụ emerụghị onwe ya, ya abụrụ na ọ dị ọcha, ihe ndị ahụ agaghị eme ya. Ọ ga-enwe ike ịdị ime, nweekwa ike ịmụ nwa. 29 “‘Ihe a bụ iwu e nyere gbasara ekworo+ ma ọ bụrụ na nwaanyị mehiere wee merụọ onwe ya mgbe ọ nọ na di 30 ma ọ bụ ma ọ bụrụ na nwoke na-ekwosa nwunye ya ekworo, na-enyokwa ya enyo na ọ gbara n’èzí. Nwoke ahụ ga-eme ka nwunye ya guzo n’ihu Jehova. Onye nchụàjà ga-emekwa nwaanyị ahụ ihe niile e kwuru n’iwu a. 31 Nwoke ahụ ga-enwere onwe ya. Ikpe agaghị ama ya. Ma nwunye ya ga-eburu ihe o metara.’”
^ Na Hibru, “Ha.”
^ O nwere ike ịbụ na ihe a na-ekwu ebe a bụ ma ọ bụrụ na onye o mejọrọ anwụọla.
^ O nwere ike ịbụ onye nchụàjà ka a na-ekwu.
^ Ma ọ bụ “kemgbe ị nọ n’okpuru di gị.”
^ Na Hibru, “iyi nke ya na ọbụbụ ọnụ so.”
^ O nwere ike ịbụ na ihe a na-ekwu bụ ihe o ji bụrụ nwaanyị.
^ Ma ọ bụ “mịkpọọ.” O nwere ike ịpụta na nwaanyị ahụ agaghịzi amụ nwa.
^ Ma ọ bụ “Ka ọ dị otú ahụ! Ka ọ dị otú ahụ!”
^ Ma ọ bụ “ga-amịkpọ.” O nwere ike ịpụta na nwaanyị ahụ agaghịzi amụ nwa.